I-TERRAVANTIUM BLADES UKUSUKA KWI-TERRAIN 365 KUNYE NE-PROMETHEUS DESIGN WERX - IZIXHOBO
I-Terravantium Blades ukusuka kwi-Terrain 365 kunye ne-Prometheus Design Werx
Ukusebenzisana neqela ngaphaya kwe-Prometheus Design Werx, iTerrain 365 ityhila uhlelo lwayo lobuchwephesha kuyilo lwefolda ye-Invictus. Ukuthatha itekhnoloji ye-blade ukuya kwiindawo eziphakamileyo, olu tshintsho lutsha lubonisa icala le-titanium slab framelock, umboniso we-G10, izixhobo zetitanium kunye nepivot.
Ngobuninzi beetitanium kunye neeceramic iibheringi ezinemidyarho yobhedu, i-Attictus-AT G10 ngama-00% ayintsimbi, ayingombane, ayirusi enezimpawu zokubamba.
Ifaka i-Terravenatium blade yabo, i-G10 ayifani nayo nayiphi na imela owawunayo ngaphambili. Ngobuchule bokwenene bendawo yonke, nokuba uphi, emhlabeni, phantsi kwamanzi, ngaphandle, okanye kwindawo eyahluke ngokupheleleyo, i-Invictus-AT G-10 blade evela kwiTerrain 365 kunye ne-Prometheus Design Werx sisixhobo esibalaseleyo sohambo lokuhlola Indalo iphela.
Ukuchaneka okwenziweyo, ukurusa, kunye nokuguquguquka, kuninzi ukuthanda malunga nale nto ye-EDC kit. Uzalelwe kuyilo oluqhutywa yinjongo, ubugcisa bemizi-mveliso ye-G-10 bongeza ii-alloys zikarhulumente wobugcisa kulwakhiwo, oko kuthetha ukuba awuzukuba naxhala malunga nomhlwa okanye ukubetha. Nokuba kukubila, ngamanzi olwandle, okanye nantoni na efafazwe sisilwanyana kuwe, i-G-10 inokuyiphatha ngokulula.
Nokuba ubhaka wakho ubhaka okanye ujikeleza nje ezitalatweni, i-G-10 yifolda yokusebenza ephezulu kwinqanaba lokusika itekhnoloji yesixhobo. I-G-10 inokulingana kuyo nayiphi na into yobuhle yabasebenzisi, efumaneka ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, okanye oluhlaza okomkhosi.
Kwaye kunye nolondolozo oluncinci olufunekayo, i-G-10 iya kukugcina ixesha lokuphila.
Ukufumana i-Invictus-AT G-10 blade folda, ndwendwela Umhlaba 365 iwebhusayithi ukuthenga eyakho namhlanje. Musa nje ukothuka kakhulu lixabiso. Ngazo zonke ezo zinto zisemgangathweni - iTerravantium dendritic cobalt, 6AL-4V titanium, G10, kunye neceramic - ilandela ukuthengwa kube kanye, kukhala kanye umthetho.
Iimpawu ze-Invictus-AT Black G-10:
I-Rustproof Blade, eQinisekisiweyo yoBomi
Irustproof Titanium Framelock Side
Icala loPapasho lwe-G10
I-Titanium Pivot, ubuhlanga beBronze, kunye neeCeramic Bearings
ICeramic Ball Detent
Isithuba esipheleleyo somva ngeJimping
I-Lanyard Pin ilingana nohlobo lweCordage
I-Billet ePocket Clip esezantsi
I-GITD yeThumbstud Cabochons
Umfanekiso weLaser oMbiweyo oyi-365 Mark
imibono encinci yegumbi losapho kunye ne-tv
yokuhlambela ibhafu yeshawari izimvo zethayile
Ungakha njani eyakhelwe edesikeni
iisilingi ezivaliweyo ezenziwe ngamaplanga
Igumbi losapho imibono yaseludongeni
Ihempe zokunxiba ezilungileyo kwihlabathi
Ukuphefumla kude haku dragon tattoo